Izunna Okafor, Awka, Nigeria
Oke ọñụ dara nnọọ n'Oko nso nso a dịka onyeisi Bishọọpụ ụka 'Brethren Gathering Ministry', bụ Bishọọpụ Edith Elisha Ezenaekwe kesàrà ọtụtụ ihe enyemaka dị iche iche nyegara ụmụnwaanyị, ụmụntakịrị na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ sitere obodo dị iche iche.
Oke mmemme ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'ụlọ ezumezu dị n'Ụmụezempụ n'okpuru ọchịchị Orumba North nke steeti Anambra, ma bụrụkwa nke dọtara ụmụnwaanyị na ụmụntakịrị karịrị otu puku n'ọnụ ọgụgụ.
N'okwu ya na mmemme ahụ, ya bụ onye ọrụ obi ebere, bụ Bishọọpụ Edith Elisha, kọwara inyere mmadụ aka dịka ihe na-atọ Chineke ezi ụtọ, dịka ọ bụ mmasị ya ka ụmụ mmadụ na-enyerịtara ibe ha aka. N'ịgbakwàsà ụkwụ n'Akwụkwọ Nsọ dịka ọ dị n'Oziọma Mark 11:22, ọ dụrụ ụmụ mmadụ ka ha nwee ntụkwàsị obi na okwukwe siri ike n'ebe Chineke nọ ma ghara itinye aka n'ihe ọjọọ ọbụla, na-agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ha hụtara onwe ha n'ime ya.
O mere ka a mara na ya bụ ọrụ obi ebe na enyemaka bụ nke ọ malitere kemgbe ihe karịrị ahọ iri abụọ gara, site n'ikèsàrà ndị mmadụ ụfọdụ ihe dị iche iche e ji enyere ndụ aka kwà ahọ ọbụla, wee ruo ugbu a, ma sị na nke ahụ so n'otu ụzọ pụrụ iche Chineke si eji ya akwara ngwa ọrụ. Ọ kpọkùkwazịrị ndị ahụ bịara ya bụ ọgbakọ ka ha gbaso udo, ma chọọkwa ọdịmma na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ bụnadị dịka ọ kpọkùrù onye ọbụla, ọ kachasị ndị aka ji akụ ka ha cheta ndị dị iche iche ụwa na-atụ n'ọnụ na mpaghara ebe ahụ ha bì.
N'okwu nke ha n'otu n'otu, onyeisi òtù ọrụ obi ebere na ọrụ enyemaka bụ 'Amaka Care Foundation', bụ onyeozi Amaka Akaigwe na onyeisi ụka 'Word Master Assembly, Nnewi' bụ Bishọọpụ ọkaiwu Rita Amaduche kọwara inyere ụmụ mmadụ aka dịka imezùpụta ọchịchọ obi Chineke na ndụmọdụ Ya nyegara ndị otu Christ. Ha bunyere ya bụ bishọọpụ ụkpa ekele maka ọrụ ọma na afọ ọma ya, bụ nke ha kọwara dịka ihe kwesiri nñomi, ma kpọkuo ndị Chineke gọziri na ndị ọrụ gọọmenti n'ogoogo dị iche iche ka na-abàgide n'atụmatụ ọrụ obi ebere dị òtù ahụ, iji wee bèlata ọnọdụ ihe isi ike a dị n'ala anyị ugbu a ma mee ka ọnọdụ kawanyere ụmụ mmadụ mma.
N'okwu nke ya n'aha ndị dị iche iche ritara úrù n'atụmatụ ahụ, oriakụ Comfort Ọkụlie sitere steeti Asaba kelere Bishọọpụ Edith maka mmetụta ahụ ọ na-enwe banyere ọnọdụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, wee were nwa obere ihe o nwere wee na-enyere ha aka, n'ụdị ijere Chineke ozi.
O kpekwazịrị ekpere ka Chineke gaa n'ihu ịkwụghachi ya mmaji kwuru mmaji na ịgbakwa ya ume iji wee rụrụ ọrụ ọma ahụ gaa n'ihu. Ihe ndị e kesaara ndị ahụ gụnyere akpa osikapa, ákwà, ego na ọtụtụ ihe oriri ndị ọzọ.